8 × 29 Podcast: Oge eruola maka Mac | Esi m mac
8 × 29 Podcast: Oge Mac abiala
Anyị bịarutere Otu izu iji #podcastapple na akụkọ na-adịbeghị anya na nke a maka ndị ọrụ Mac. Companylọ ọrụ ahụ n'onwe ya kwupụtara n'ehihie ụnyaahụ na Macs ga-enwe ohere ha n'ime afọ a nakwa na maka afọ na-abịanụ anyị ga-enwe Mac Pro ọhụrụ nke ga-adọrọ mmasị nke ukwuu maka ndị ọrụ ọkachamara, yana nhọrọ mgbasawanye akụrụngwa. Na mgbakwunye na ozi ọma a dị ogologo oge, ha kwuputara ego na ọnụahịa nke ụdị ugbu a, mbata nke iMac ọhụrụ n'afọ a, nloghachi nke nrụpụta nke ndị nlekota nke ha na Mac mini ... Ihe a niile na ọtụtụ Ihe ndi ozo bu ihe anyi kwuru banyere ya na pọdkastị nke ụtụtụ a na ị nwere ike ịchọta n'ime anyị iTunes channel ịge ya ntị na otu ị chọrọ.
Mana ọ bụghị pọdkastị niile lekwasịrị anya na Macs, anyị kwukwara obere banyere mwepụta nke Samsung Galaxy S8 ọhụrụ, mmelite iOS na ọtụtụ ndị ọzọ. O doro anya na anyị na-ahapụ vidio vidio e dere n'abalị a na ọwa YouTube anyị niile Apple:
Chetakwa na ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkọrọ ndị ezinụlọ gị, ndị enyi gị, ndị agbata obi gị, ndị ị maara na ndị ọzọ, anyị ga-enwe ekele maka ya. Dị ka mgbe niile, na-eso gị iTunes ọwa na-enweta site na njikọ ọzọ na ebe ị ga-ahụ pọdkastị niile. I nwekwara ike soro anyị na netwọkụ mmekọrịta ma kesaa echiche gị, ajụjụ ma ọ bụ ntụnye gị oge ọ bụla, ndị otu PodcastApple na-anabata ha. Cheta na ị nwekwara ike iji hashtag #podcastapple na Twitter Na mgbakwunye na ọwa ndị ọzọ, netwọkụ mmekọrịta na-enwe ike ịkpọtụrụ anyị. Izu na-abịa anyị ga-alaghachi na Podcast ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » 8 × 29 Podcast: Oge Mac abiala
Gee ntị! Apple nwere ike belata ọnụahịa na Spain nke ekweisi emeghe Beats Solo2, Luxe Edition